नेटवर्किङ व्यावसायका मास्टरमाइन्ड विष्णु क्षत्री कहाँ छन् ? « हाम्रो ईकोनोमी
नेटवर्किङ व्यावसायका मास्टरमाइन्ड विष्णु क्षत्री कहाँ छन् ?
२ बर्ष ४ महिना कैद भुक्तान गरी नख्खु कारागारबाट निस्किएका नेटवर्किङ व्यावसायका मास्टरमाइन्ड विष्णु क्षत्री कहाँ छन् ? कतिपयको अनुमान छ– उनले मुलुक छाडिसके, भारततिर बस्छन् । कतिपय भन्छन्,‘चितवनतिर बसेरै नयाँ योजना बनाइरहेका हुन सक्छन् ।’
अनुमानबीच उनको चर्चा चल्नुको कारण हो, नेटवर्किङ व्यावसायको अवैध धन्दाको अभियोगमा हालै प्रहरीले पक्राउ गरेका भारतीय अभियुक्तहरूमाथिको अनुसन्धान ।
यस्तै व्यावसायको तालिम दिने क्रममा राजधानीको याक एन्ड यति होटलबाट ९ नौ जना भारतीय नागरिक पक्राउ गरेपछि युनिटी इन्टरनेशनलको अर्बौंको नेटवर्किङ व्यावसाय खडा गरी सर्वसाधारणको रकम अपचलन गरेको प्रकरणमा दोषी ठहर भई जेल सजाय काटेर निस्किएका क्षत्रीको सन्दर्भ प्रहरीमा उठेको हो ।
युनिटी इन्टरनेशनल नाममा मुलुकभरका धेरै व्यक्तिको रकम उठाएर त्यसको अपचलन गरेको अभियोग लाग्नासाथ क्षत्री ४ बर्ष गुमनाम थिए । सामाजिक सञ्जालमा हत्या भएको भनी प्रचार गरिएपछि ०७२ मा प्रहरीले उनलाई खोजेर जेलसम्म पुराएको थियो । जेलमुक्त भएपछि क्षत्री अहिले सार्वजनिक जीवनमा छैनन् । उनी मिडिया र सामाजिक सञ्जालबाट पनि निक्कै टाढा गुमनाम बसेका छन् ।
सर्वसाधारणलाई प्रलोभनमा पारी ३ अर्ब ७९ लाख ठगी गरेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालत ललितपुरले उनीहरूलाई ३ वर्ष कैद र जनही १ करोड ६ लाख रुपैयाँ असुलउपर गर्ने फैसला गरेको थियो । प्रहरीले २०६७ मा नै कारबाही सुरु गरे पनि क्षत्री दाजुभाइ भारतमा लुकेर बसेकाले अदालतको फैसला कार्यान्वयन भएको थिएन । क्षत्री दाजुभाइले अदालतबाट तोकिएको जरिवाना नबुझाएको र फैसला कार्यान्वयनका लागि दुवैलाई नक्खु कारागार पठाइएको थियो ।
‘हत्या’को नाटक र पार्टी खोल्ने तयारीको त्यो कथा !
प्रहरीले भेट्न नसकेका क्षत्री पक्राउ पर्नुको मुख्य कारण थियो– सामाजिक सञ्जालमा हत्याको नाटकीय अभ्यास । ‘हत्या’ भएको भनेर गलत सूचना सार्वजनिक गर्ने दाइ कृष्ण क्षेत्री पनि सँगै पक्राउ परेका थिए ।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले सञ्चालक क्षेत्री दाजुभाइलाई नेपाल भारतको सीमा नाका गड्डाचौकीबाट पक्राउ गरेको थियो, पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक पनि गरिएको थियो । ०७२ मा भाई कृष्ण केसीले आफ्नो दाजु विष्णुको गोली हानी हत्या भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अफबाह फैलाएका थिए ।
युनिटी इन्टरनेशनलको सक्रियता भएका बेला क्षत्रीले राजनीतिक पार्टी ‘युनिटी’का लागि नै लगानी गरेका थिए । नेटवर्किङ व्यावसायको आडमा क्षत्री राज्यको मुख्य निकायसम्म पुग्ने लोभमा लाखौं रकम खर्च गर्न तयार थिए । तर उनको पक्राउसँगै जेल जीवनले उक्त अभियान सफल हुन पाएन ।
व्यावासायका क्षेत्रमा छरिएको रकमलाई एकतित्र गरी कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयका मास्टरमाइन्ड हुन् क्षत्री । ‘उनले केही न केही दिमाग लगाएर नयाँ कामको तयारी गरेका हुन सक्छन्, जेलमा बस्दा पनि उनी कैदीबन्दीलाई प्रशिक्षण दिने गर्दथे’, नख्खु कारागारमा कार्यरत एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्,‘उनले सोही कारण पनि जेलमा छवि राम्रो बनाएको रिपोर्ट बनेको थियो ।’
उनले विभिन्न अपराधमा जेलमा बसेका कैदीलाई सामाजिक रुपान्तरण कसरी हुने भन्ने प्रशिक्षण दिने गरेका थिए । ‘उनको कन्भिन्स गर्ने तौरतरिका देखेर हामी पनि छक्क पर्दथ्यौं’, ति सुरक्षा अधिकारी भन्छन्,‘कैदीबन्दी माझ अहिले पनि उनको चर्चा हुने गर्दछ ।’
क्षत्रीले युनिटी इन्टरनेशनल चलाउने क्रममा दोस्रो बिहे पनि गरेका थिए । उनको पक्राउसँगै पारिवारिक सम्बन्धमा पनि खटपट आएको थियो । उनका पारिवारिक मुद्दा जिल्ला अदालत पाटनमा रहेको बताइन्छ । दैनिक नेपालबाट